नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयकाे सिनेमा हल खुलाइने – ramechhapkhabar.com
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयकाे सिनेमा हल खुलाइने
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा तत्कालीन राजपरिवारले हेर्ने गरेको सिनेमा हल खुलाइने भएको छ ।सङ्ग्रहालय हेर्न आउने अवलोकनकर्तालाई सिनेमा तथा डकुमेन्ट्री देखाइने गरि सिनेमा हल खुलाइने भएको हो ।
सिनेमा हल दरबार हत्याकाण्डपछि बन्द रहेको थियो । छिट्टै सिनेमा हल खुलाउन तयारी गरिरहेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ । सङ्ग्रहालय अवलोकनकर्ताले सिनेमा हलप्रति चासो देखाएका कारण सो हल खुला गर्न लागिएको हो ।
तत्कालीन राजपरिवारले हलमा स्वदेशी,विदेशी नयाँ पुराना फिल्म, डकुमेन्ट्री र राजपरिवारसँग सम्बन्धित फिल्म तथा भिडियो हेर्ने गरेका थिए । हलमा ११६ वटा सिट रहेका छन् ।
भारतबाट झन्डै ४ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिवद्धता, कुन क्षेत्रमा कति ?
काठमाडौं- भारतबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालामा रु. ३ अर्ब ८६ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालमा भारतदेखि आएको प्रतिबद्धताबाट ५ परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले २ सय ३० जना व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षमता राख्दछ । उद्योग बिभागबाट प्राप्त तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आवको ८ महिनामा भारतदेखि निर्माण क्षेत्रमा रु. २ अर्ब ३६ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त क्षेत्रमा आएको प्रतिबद्धतामा २ परियोजना छन् जसको कुल खर्च रु.३ अर्ब ६० करोड बराबर रहेको छ । उक्त परियोजना सञ्चालन भएमा ६४ जना व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।
यस्तै, भारत नेपालको सेवा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । भारतदेखि नेपालमा सेवा क्षेत्रमा रु १ अर्ब ६६ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त प्रतिबद्धताबाट ३ परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उक्त परियोजना सञ्चालन गर्दा १ सय ६६ जना व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।